တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး။
တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး။
Posted by phone_kyaw on Jan 11, 2012 in Copy/Paste |9comments
တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး တစ်ခါလာလည်း သမ္မတကြီး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးသိန်းစိန်ဆီကို လိပ်မှုပြီးတိုင်ကြတောကြနဲ့ ။ တယ်လီဖုန်းဆင်းကတ်လေးအရောင်းအဝယ်လုပ်လည်း သမ္မတကြီး မပါမဖြစ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးဖို့ စာရေးတောင်းဆိုလည်း သမ္မတကြီး ထိပ်ပြောင်ပဲ။ လမ်းဘေးက အမှိုက်ပုံရွှေ့ ပေးဖို့ လည်း ဒီဦးသိန်းစိန်ကိုပဲ စာရေးကြတယ်။ တစ်ခုခုမဖြစ်နဲ့ ဖြစ်တာနဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆီကိုပဲ လိပ်မှုတယ်။ ဆိုတော့ဗျာ..လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ ထဲမှာ ဦးသိန်းစိန်ပဲ အသက်ရှိတာကြနေတာပဲ။ ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေ လွှတ်တော်အမတ်တွေရှိနေတာပဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဦးသိန်းစိန်ဟုခေါ်သော ထိပ်ပြောင်အဘိုးကြီးကိုပဲ အားကိုးနေကြတာလဲ။ လွဲနေလားလို့ ပါ။
အတန်းပိုင်-အတန်းမှူး စတာတွေကို တိုင်တာထက် ကျောင်းအုပ်ကြီးကို တက်တိုင်လိုက်ရင် ပိုတာမသွားဘူးလားခင်ည
ကျနော်တော့ အဲသလိုပဲ မှတ်ပါတယ် အဘိုးရေ
၂၀၁၁ ခုနှစ် စာပေးခံရတာ အများဆုံး ဆုကို သမ္မတကြီး ကရရှိသွားပါသည်။။
ဦးသိန်းစိန် ကိုမှမတိူင်ရင်လဲ ကျန်လက်အောက်ငယ်သား သူတောင်းစားတွေက အာဏာရူးနေကြတာ
သူတို့အားကိုးလို့ကတော့ လာထား ရေ ဆိုတာချည်းပဲ။ရေမပါရင်မပြီးဘူးဟ ရေပေးရင်တောင် ကိုယ့်တိုင်စာက ရောက်ချင်မှရောက်မှာ အလကား စောက်သုံးမကျတဲ့ဟာတွေ။
ကိုဘုန်းကျော်ကိုနာမည်ပြောင်းရမယ်ထင်တယ်။ သကြီးသားဖိုးစီလို့ ( မန်းဂေဇက်သကြီးမဟုတ်ပါ )။ ရွာထဲမှာစီကနဲဆိုဖိုးစီပဲ။ ဟိုနားထီကနဲ့ဆိုဖိုးစီပဲ။ သူကြီးသားက သူကြီးတပည့်လူမိုက်အားကိုးနဲ့ရမ်းတယ်။ ကိုဘုန်းကျော်ကရောဘာအားကိုးနဲ့ရမ်းပါလိမ့်။ အရွယ်သုံးပါးနားဝင်သာတဲ့စကားလုံးလေးတွေရွေးသွားလို့တော့ကျေးဇူးပါ။
စာရေးသူရေးသလိုပဲ …သမ္မတကြီးကိုပဲ ပြည်သူတွေကအားကိုးလို့နေမှာပေါ့… မြစ်ဆုံကိတ်စမှာ သမ္မတကြီးကိုကြည်ညိုသွားကြလို့လေ… ပြည်သူတွေရဲ့ဆန်ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်လို့ပေါ့… တကယ့်ကိုလုပ်ပေးချင်တဲ့စေတနာရှိတယ်လို့ယူဆလို့ပေါ့….. ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ မယုံရဲသေးလို့ပေါ့ .. ဥပမာ (လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးတို့ ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့၊ အခု 5000 တန်ကိတ်စမှာပဲကြည့် ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိတွေရဲ့ ပြောပုံတွေလေ ) ယခင်ဘဘကြီးရဲ့လူတွေများနေသေးတာကိုး ………. ကဘုန်းကျော်ရဲ့
အရင်အစိုးရတုန်းကအောက်ခြေကနေအဆင့်ဆင့်စာတင်ရင် ၂ ဆင့်လောက်မှာစာပျောက်ကရော။ အထက်ရောက်တော့အားလုံးကောင်းပါသည်ဘုရားဖြစ်ကရော။ ဒါကိုသိလို့ သမ္မတကြီးကသူ့ဆီစာ တိုက်ရိုက်တင်ခိုင်းတာပါ။ ဒါမှလဲတိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအမှန်အတိုင်းမချွင်းမချန်သိရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေကအားကိုးတကြီးတိုက်ရိုက်စာတင်တာပါ။ တကယ်လဲထိရောက်ပါတယ်။
Three miners have been seriously injured at the Agnew gold mine in Western Australia’s Goldfields.
The RFDS’s Sally Edmonds says the outcome of the incident could have been worse.
“Always lucky to get out of an accident alive,” she said.
Topics: mining-industry, workplace, leinster-6437, perth-6000